Halloween bụ a ezumike ka anyị kwadebe na-atụghị anya ịtụnanya na ịtụnanya ezinụlọ, ndị enyi na ndị ikwu. Gịnị bụ gị atụmatụ? Ọfọn, ememe nke nnukwu ụbọchị, ọ bụ oké echiche na anyị nwere ụfọdụ spooky egwuregwu ke ọzọ. N'okpuru ebe m na-anakọta ụfọdụ Halloween ọzọ echiche maka ụmụaka, nke ga-eme ka gị na Halloween ọzọ funnier.
1. Guess Ònye Game
Nke a bụ a na-akpa ọchị egwuregwu na mmalite nke otu. Mgbe ọ bụla ọbịa-abịarute, ị pụrụ inye a mpempe akwụkwọ taped ha azụ a Halloween agwa ma ọ bụ ihe e dere na ya. Ihe nke egwuregwu bụ maka onye ọ bụla ọbịa chepụta ndị ha bụ.
Onye ọ bụla na-aga gburugburu ma na-ajụ ndị ọzọ ọbịa ajụjụ banyere ha omimi agwa ma ọ bụ ihe.
Ndị ọbịa pụrụ nanị zaa ee ma ọ bụ ọ na ajụjụ.
2. Okwu scramble Game
Achọ pụrụ iche Halloween egwuregwu? Gbalịa a Halloween Okwu scramble Game. Fun na mfe!
Nye onye ọ bụla ọkpụkpọ a mpempe akwụkwọ na a aba, Halloween metụtara okwu na n'elu nke na peeji nke, dị ka Halloween, achụ anụmanụ, ma ọ bụ Frankenstein, ect.
Mee a oge ịgba nke 1 - 3 nkeji na-ahụ otú ọtụtụ okwu, ọ dịkarịa ala 3 akwụkwọ ozi ogologo, nwere ike eji naanị akwụkwọ ozi ndị si ogologo okwu.
3. ato uto na ọchịchịrị
Halloween ọzọ juputara candies - chocolate Ogwe, mkpụrụ chews, caramels ... Mee zuru play nke swiiti nhọrọ na-eji ya maka otu n'ime anyị mmasị Halloween ọzọ egwuregwu, "ato uto na ọchịchịrị
Eji nkechi anya abụọ Player, na-enye ha ọ bụla a swiit nụrụ ụtọ. Adịghị enye ha otu swiiti ma ọ bụ ekpomeekpo.
Gwa ndị Player mata ma ụdị nke swiiti mmanya ma ọ bụ agba / ekpomeekpo, ma ọ bụrụ na ọ bụ mkpụrụ swiiti. Mbụ ọkpụkpọ iji nweta ya na-ezighị ezi bụ, na a ọhụrụ ọkpụkpọ na-ewe ebe. Mbụ ọkpụkpọ na-ise na esepu ziri ezi Enwee Mmeri.
4. ugu Golf
Ọ bụ a na-akpa ọchị egwuregwu. Ihe niile anyị nwere ime bụ see golf bọl n'ime a ugu. Ya mere, tupu egwuregwu, Wapụtara a ugu na-eme ka ọnụ mmezi nnukwu. Teepu ramp ka n'ala maka kwụsie ike.
Akara a amalite ole na ole ụkwụ site na mmalite nke ramp. Ndị okenye na ụmụaka, na anya n'ebe.
Onye ọ bụla ọkpụkpọ ọkọkpọhi see a golf bọl ugboro atọ.
Oge ọ bụla na obi ụtọ na-aga n'ime ugu, ọkpụkpọ-enweta nkwanye swiit.
5. Gross jidere akpa
Ọṅụ nke Halloween otu bụ iru n'ime-amaghị ama, nwalee egwu na pụta ihe na-atọ ụtọ na njedebe. Ya mere egwuregwu a bụ zuru okè n'ihi na ụmụaka!
Kechie obere ụmụaka ma ọ bụ nwa anụmanụ na ịrapara film iji gbochie ha ịlụ mebiri emebi mgbe ha na-ezo na Jell-o.
Jupụta a nnukwu efere ma ọ bụ ịwụ na Jell-o na-edebe obere ụmụaka n'ime, na-elekọta zoo ha miri ke Jell-o. Eji nkechi anya ọkpụkpọ ya mere ha anaghị ahụ ihe ha na-arapara n'ahụ ha aka, akpa ogho ha gburugburu na-arịọ ha iru na wepụ a na-agbata n'ọsọ.
M n'aka ndị a Halloween egwuregwu echiche maka ụmụaka ga-eme ka ha nwekwuo obi ụtọ na ndị ọzọ. Gbaa na-akpa ọchị videos nke ụmụaka na-eme ka a Halloween video na software dị ka Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ ezi echiche na-a bara uru na ebe nchekwa. Dị nnọọ na-malitere na-enwe spooky Halloween.
> Resource> Game> Top 5 Halloween Party Games maka Kids